Aza mihazona enta-mavesatra ho anao
"Apetraho aminy (amin’Andriamanitra) ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo."1 Petera 5:7
"Sambatra izay rehetra mialoka aminy."Salamo 2:12
Rehefa nampahafantarina ahy ny aretina mafy nahazo ny zafikeliko, dia latsaka tao anaty fahakiviana lalina aho. Raha nifampiresaka tamin’ny namako iray aho, dia niteny tsotra tamiko izy hoe: «Tsy zakanao izao zava-mavesatra izao, fa tokony hapetrakao tanteraka eo am-pelatanan’Andriamanitra». Toa mandeha ho azy izany, amiko, ka tsy nahoako loatra.
Ny alin’io dia nivadibadika aho, nitambesaran’izany fahoriana izany, ary tsy nahatsapa akory fa hay aho nanandrana nitondra ampahany tamin’izany. Dia hitako ny lanjan’ilay fampaherezana: tsy napetrako teo am-pelatanan’ny Tompoko ny zava-drehetra. Nanaiky aho hoentin’ny fisaintsainako, izay nanosika ahy hitebiteby na toa hanantena. Ka dia niahiahy ny amin’ny fitiavana lavorary omen’i Jesosy aho, ary nikorontan-tsaina ihany.
Ry namana kristiana, tery ve ianao, ory, kivy noho ny vesatry ny fangirifiriana sy ny zava-manahirana anao? Ndeha àry miresaka amin’ny Tompo Jesosy, mamboraka aminy ny fahorianao manontolo, ny fanahianao rehetra, ary aza misy tazonina ao anatinao. Apetraho eo an-tongony avokoa ny zava-drehetra, ka avelao Izy irery no hiasa. Angatahiny isika hametraka ny fitokisantsika aminy, tsy hoe indraindray, fa amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny zavatra rehetra, na dia izay manahiran-tsaina sy mampitebiteby antsika indrindra aza. Raha tsy misy an’i Kristy isika, dia tsy mahay manao na inona na inona. Angatahiny isika hiara-mandroso aminy, manao dingana iray hatrany hatrany, isanandro. Aoka hiankina aminy, ary ny fiadanan’Andriamanitra no hiaro ny fontsika sy ny hevitsika ao amin’i Kristy Jesosy (Filipiana 4:7).